Incwadi evulekile yokusekela i-TPAN - The World March
Ikhaya » Izaziso » Amanothi e-Press » Incwadi evulekile yokusekela i-TPAN
Abaholi bamazwe bangaphambili abangama-56 basekela iSivumelwano Sokuvinjelwa Kwezikhali ZaseNyukliya
21 September ka-2020
Ubhadane lwe-coronavirus lukhombise ngokusobala ukuthi ukubambisana okukhulu kwamazwe omhlaba kuyadingeka ngokuphuthumayo ukubhekana nazo zonke izinsongo ezinkulu empilweni nasenhlalakahleni yabantu. Okuyinhloko phakathi kwabo usongo lwempi yenuzi. Namuhla, ubungozi bokuqhunyiswa kwesikhali senuzi - kungaba ngengozi, ukubalwa ngendlela engeyiyo noma ngenhloso - kubonakala ngathi kuyanda, ngokusatshalaliswa kwezinhlobo ezintsha zezikhali zenuzi, ukushiywa kwezivumelwano esezinesikhathi eside zilawulwa izikhali kanye nengozi yangempela yokuhlaselwa ngamanethiwekhi kwingqalasizinda yenuzi. Masilalele izixwayiso ezenziwe ososayensi, odokotela nabanye ochwepheshe. Akumele silale enkingeni enkulu kakhulu kunaleyo esike sabhekana nayo kulo nyaka.
Akunzima ukubona kusengaphambili ukuthi izinkulumo zokulwa nezinqumo ezimbi ezenziwa ngabaholi bamazwe ahlomile ngezikhali zenuzi zingaholela kanjani enhlekeleleni ezothinta zonke izizwe nabantu bonke. Njengabongameli bangaphambilini, ababengongqongqoshe bezangaphandle nabangungqongqoshe wezokuvikela e-Albania, eBelgium, eCanada, eCroatia, eCzech Republic, eDenmark, eJalimane, eGrisi, eHungary, e-Iceland, e-Italy, eJapane, eLatvia, eNetherlands, eNorway, ePoland, ePortugal, eSlovakia, ISlovenia, iSouth Korea, iSpain neTurkey - wonke lawa athi avikelwe yizikhali zenuzi ezisebenzisana nawo - acele abaholi bamanje ukuthi baphokophele ukuphucwa izikhali kungakephuzi. Isiqalo esisobala sabaholi bamazwe ethu kungaba ukumemezela ngaphandle kokugodla ukuthi izikhali zenuzi azinanjongo esemthethweni, ezempi noma amasu, ngokubheka
imiphumela eyinhlekelele yabantu nezemvelo yokusetshenziswa kwayo. Ngamanye amagama, amazwe ethu kufanele enqabe noma iyiphi indima enikezwa izikhali zenuzi ekuvikeleni kwethu.
Ngokuthi izikhali zenuzi ziyasivikela, sithuthukisa inkolelo eyingozi nengamanga yokuthi izikhali zenuzi zithuthukisa ezokuphepha. Esikhundleni sokuvumela inqubekela phambili ebheke ezweni elingenazo izikhali zenuzi, siyayivimba futhi siqhubekisela phambili izingozi zenuzi, konke ngenxa yokwesaba ukucasula abangane bethu ababambelele kulezi zikhali zokubhujiswa okukhulu. Kodwa-ke, umngani angakhuluma futhi kufanele akhulume uma omunye umngane engena ekuziphatheni okunganaki okubeka impilo yabo kanye neyabanye engcupheni.
Ngokusobala, umjaho omusha wezikhali zenuzi uyaqhubeka futhi umjaho wokulwa nezikhali uyadingeka ngokuphuthumayo. Isikhathi sokuqeda unomphela inkathi yokuncika ezikhalini zenuzi. Ngo-2017, amazwe ayi-122 athatha igxathu elinesibindi nelidingeka kakhulu kuleyo ndlela ngokwamukela i- ISivumelwano Sokuvimbela Izikhali Zase-Nuclear, isivumelwano somhlaba esiyingqophamlando esibeka izikhali zenuzi ngesisekelo sezomthetho esifanayo
amakhemikhali nezikhali zebhayoloji, futhi kusungula uhlaka lokuqedwa kwazo okungaqiniseki futhi okungenakulungiseka. Maduze nje kuzoba umthetho obophezelayo wamazwe omhlaba.
Kuze kube manje, amazwe ethu akhethe ukungahambisani neningi lomhlaba ekusekeleni lesi sivumelwano, kepha lesi yisikhundla abaholi bethu okufanele basicabangele. Asinakukwazi ukuntengantenga lapho sibhekene nalolu songo olukhona esintwini. Kufanele sikhombise isibindi futhi siqinisekise futhi sijoyine isivumelwano. Njengamaqembu eMelika, singahlala ngokusebenzisana namaZwe ngezikhali zenuzi, ngoba akukho lutho esivumelwaneni uqobo noma ezinhlakeni zethu zokuvikela ukuvimbela lokhu. Kodwa-ke, sizobophezeleka ngokomthetho, noma nini, futhi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, ukusiza noma ukukhuthaza ababambisene nabo ukuthi bazisebenzise, ​​basongele ukusebenzisa noma ukuphatha izikhali zenuzi. Ngokunikezwa ukwesekwa okubanzi kwabantu emazweni ethu mayelana nokulwa nezikhali, lokhu kungaba yinto engenakuphikwa futhi enconywe kakhulu.
Isivumelwano sokwenqatshelwa ukuqiniswa okubalulekile kweSivumelwano Sokungasabalali, manje esesineminyaka engamashumi amahlanu sikhona futhi, nakuba siphumelele ngokumangalisayo ekunqandeni ukusakazwa kwezikhali zenuzi emazweni amaningi, sehlulekile ukusungula isimemezelo esiphikisayo ukuphatha izikhali zenuzi. Izizwe ezinhlanu ezihlomile ngezikhali zenuzi ezazinezikhali zenuzi ngenkathi kuxoxiswana nge-NPT - i-United States, iRussia, iBrithani, iFrance neChina - zibonakala zikubona kuyilayisense yokugcina amandla azo enuzi unomphela. Esikhundleni sokulwa nezikhali, batshala imali enkulu ekuthuthukiseni izinqolobane zabo, ngezinhlelo zokuzigcina amashumi eminyaka amaningi. Lokhu kusobala ukuthi akwamukelekile.
Isivumelwano sokuvinjelwa esamukelwe ngo-2017 singasiza ukuqeda amashumi eminyaka okukhubazeka kwezikhali. Kuyisibani sethemba ngezikhathi zobumnyama. Ivumela amazwe ukuthi abhalise emthethweni ophakeme kakhulu wamazwe amaningi wokulwa nezikhali zenuzi kanye nokufaka ingcindezi yamazwe omhlaba yokwenza okuthile. Njengoba isendlalelo saso sibona, imiphumela yezikhali zenuzi “yeqa imingcele yamazwe, inemiphumela emibi kakhulu ekusindeni kwabantu, ezemvelo, ukuthuthuka kwezenhlalo nezomnotho, umnotho womhlaba, ukuphepha kokudla kanye nempilo yezizukulwane zamanje nezizayo. , futhi zinomphumela ongalingani kwabesifazane namantombazane, nanjengomphumela wemisebe ye-ionizing.
Njengoba kunezikhali zenuzi ezicishe zibe ngu-14.000 ezitholakala ezindaweni eziningi emhlabeni wonke nasemikhunjini engaphansi komhlaba ehambahamba olwandle ngaso sonke isikhathi, amandla okubhujiswa adlula ukucabanga kwethu. Bonke abaholi abanomthwalo wemfanelo kumele bathathe izinyathelo manje ukuqinisekisa ukuthi ukwesabeka kuka-1945 akuphindeki futhi. Ngokushesha, inhlanhla yethu izophela ngaphandle kokuthi sithathe isinyathelo. Yena ISivumelwano Sokuvimbela Izikhali Zase-Nuclear kubeka isisekelo sezwe eliphephe kakhulu, elingenalo lolu songo olukhona. Kufanele sikwemukele manje futhi sisebenzele abanye ukuthi bajoyine. Alikho ikhambi lempi yenuzi. Inketho yethu kuphela ukuyivimbela.
ULloyd Axworthy, OwayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseCanada
I-Ban Ki-moon, owayenguNobhala-Jikelele we-UN nowayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseNingizimu Korea
UJean-Jacques Blais, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseCanada
UKjell Magne Bondevik, owayenguNdunankulu futhi owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle eNorway
Ylli bufi, owayenguNdunankulu wase-Albania
UJean Chrétien, owayenguNdunankulu waseCanada
UWilly claes, OwayenguNobhala Jikelele weNATO nowayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseBelgium
U-Erik derycke, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseBelgium
UJoschka Fischer, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseJalimane
UFranco Frattini, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle wase-Italy
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle wase-Iceland
IBjørn Tore Godal, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle nowayenguNgqongqoshe Wezokuvikela eNorway
UBill Graham, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle kanye noNgqongqoshe Wezokuvikela waseCanada
Hatoyama Yukio, owayenguNdunankulu waseJapane
I-Thorbjnrn Jagland, owayenguNdunankulu futhi owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle eNorway
ULjubica Jelušič, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseSlovenia
UTālavs Jundzi, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela Kwangaphandle eLatvia
UJan Kavan, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseCzech Republic
ULodz Krapež, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseSlovenia
Iziketi Valdis Kristovskis, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle kanye noNgqongqoshe Wezokuvikela waseLatvia
Aleksander Kwaśniewski, owayenguMongameli wasePoland
Yves leterme, owayenguNdunankulu futhi owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseBelgium
Enrico Letta, owayenguNdunankulu wase-Italy
U-Eldbjørg Løwer, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseNorway
UMogens Lykketoft, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseDenmark
UJohn mccallum, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseCanada
UJohn manley, OwayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseCanada
URexhep Meidani, owayengumongameli wase-Albania
UZdravko Mršić, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseCroatia
ULinda Mūrniece, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela eLatvia
UNano Fatos, owayenguNdunankulu wase-Albania
UHolger K. Nielsen, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseDenmark
U-Andrzej Olechowski, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle ePoland
UKjeld Olesen, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle nowayenguNgqongqoshe Wezokuvikela eDenmark
Ana Palacio, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseSpain
UTheodoros Pangalos, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseGrisi
UJan Pronk, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseNetherlands
Vesna Pusić, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseCroatia
UDariusz rosati, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle ePoland
URudolf scharping, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseJalimane
UJuraj Schenk, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle weSlovakia
UNuno Severiano Teixeira, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela wasePortugal
UJóhanna Sigurðardóttir, owayenguNdunankulu wase-Iceland
Össur Skarphéðinsson, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle wase-Iceland
UJavier Solana, owayenguNobhala Jikelele weNATO nowayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseSpain
U-Anne-Grete Strøm-Erichsen, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseNorway
Hanna suchocka, owayenguNdunankulu wasePoland
USzekeres Imre, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseHungary
Tanaka makiko, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseJapan
Tanaka naoki, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseJapan
UDanilo Türk, owayengumongameli waseSlovenia
I-Hikmet Sami Türk, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseTurkey
UJohn N. Turner, owayenguNdunankulu waseCanada
Guy Verhofstadt, owayenguNdunankulu waseBelgium
UKnut Vollebæk, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseNorway
UCarlos Westendorp neNhloko, owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle waseSpain